China Central Console & DC Drive Cabinet fekitori uye vagadziri | Mingshuo
OL akatevedzana DC nemotokari iri ainyanya kushandiswa kutyaira DC injini, uye zvinowanzoshandiswa nomoto chubhu chigayo indasitiri. Yayo yakasarudzika isina simba magineti ekudzora wedunhu inogona kuona yakafara kumhanya kudzora chiyero cheDC mota. Dhijitari yaro inodzora yedhijitari wedunhu haigone kungoita iyo DC dhiraivha ine rakatsiga basa uye rakasimba kupokana-kugona, asi zvakare ine yakanaka mushandisi interface iri nyore kuti ishandiswe. DC dhiraivha inosanganisira: 3-chikamu 6 kupomba SCR inogadzirisa excitation kuzvidzora module, zvizere digitaalinen DC kudzora redunhu.
Dc Dhiraivha Cabinet
DC Drive kabhodhi ine matatu akateedzana: komputa-kudzora inosimudzira modhi, ese-edhijitari Euro Drive yepakutanga modhi uye ese-edhijitari Euro Drive yekuwedzera modhi. Torera kumhanyisa-kwazvino kaviri padhuze-loop kudzora, ine hunhu hwehupamhi kumhanya mutemo renji, nakisa kusimba kuita, akawanda mota motori kubatana.
Ichi chishandiso kunze kwenyika chinoshanda kune akareruka maindasitiri, kugadzira mapepa, mapurasitiki, pombi uye chubhu kutenderera, kemikari, simenti nezvimwe.
Voltage giredhi: 460v / 230v Izvozvi nhanho: 100A ~ 3000A
Yese yedhijitari (Euro Drive yakateedzana)
Kutyaira uye nekumhanyisa mirawo yeDC mota, yakanyanya kunyatsoita DC magetsi.
OL akatevedzana DC nemotokari anowanzotsigi- kushandiswa kutyaira DC injini, uye zvinowanzoshandiswa nomoto chubhu chigayo indasitiri. Yayo yakasarudzika isina simba magineti ekudzora wedunhu inogona kuona yakafara kumhanya kudzora chiyero cheDC mota. Dhijitari yaro inodzora yedhijitari wedunhu haigone kungoita iyo DC dhiraivha ine rakatsiga basa uye rakasimba kupokana-kugona, asi zvakare ine yakanaka mushandisi interface iyo iri nyore kuti ishandiswe. DC dhiraivha inosanganisira: 3-chikamu 6 kupomba SCR inogadzirisa excitation kuzvidzora module, zvizere digitaalinen DC kudzora redunhu.
Yakakwana dhizaini dhizaini
Egr.Kubatanidzwa dhizaini yeDC dhiraivha ine maficha eakaumbika dhizaini uye diki saizi. Yekutanga mhando kana yekuwedzera mhando dhizaini inosarudzika.
②.Main loop thyristor inotora yakanyanya kushanda mhepo kutonhodza radiator iyo iri nyore kuisa uye kugadzirisa.
IghHigh standard electromagnetism kuenderana dhizaini, electromagnetism radiation inosangana nenyika muyero.
④.Yakavharwa kabhineti dhizaini, kusangana kwakasimba kwezvakatipoteredza zvinodiwa pane saiti.
⑵ Yakazara dijitari kutonga system
①.Tora 590DIGITAL akateedzana akazara edhijitari controller kuti aone chaiyo synchronous trigger neakakwira kutonga kwakaringana kwemota kumhanya uye nekukurumidza kupindura kumhanya.
OperationMotor oparesheni paramende inotora dijitari menyu yekumisikidza, iri nyore uye inochinja ine HMI yakanaka.
③ Simba rekushandisa rine rakakwana dziviriro basa nekuvimbika kunoshanda uye kwakaderera kutadza chiyero.
kusarudzwa kwemidziyo *
1.Sarudza DC dhiraivhiti modhi seyakavhenekwa magetsi uye yakayerwa simba remota yeDC.
2. Iyo DC dhiraivha inoda kuchengetedza 20% magetsi margin.
Iyo console inowana kure kure kudzora uye simba mirau ye solid-state HF welder, yakaiswa neLCD; zvakare ine zviratidzi zve armature voltage, munda voltage pane DC drive kabati uye zviratidzo zve DC voltage, DC ikozvino pane welder. loop control basa rinosarudzika.Console ine dhizaini mutsauko zvinoenderana nemhando dzakasiyana uye huwandu hwekufananidza DC drive kabhodhi.
Pashure: Kutenderera Nyoro Yemvura Kutonhora Sisitimu
Zvadaro: China yakakwira kushanda kwakasimba solid state H-Beam hf induction welder 1000kw yekutengesa muchina